Ngwaahịa ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya - Nkwakọ ngwaahịa ziling
Nsogbu Mmetụta Akara liner
Ihe mejupụtara liner ahụ bụ ihe ụfụfụ nke ejiri ihe nrụgide dị elu. A na-akpọkwa liner a otu ụzọ. Ọ na-enye akara siri ike na nrapado ya na akpa site na nrụgide naanị. Na-enweghị ihe ọ bụla akara na kpo oku ngwaọrụ. dị ka ihe na-ekpo ọkụ na-agbaze agbaze induction, dị maka ụdị ihe ọ bụla: plastik, iko na arịa metal. Ma emebeghi ya maka ihe mgbochi, mmetụta ya dị obere karịa nke mbụ, yabụ na-atụ aro ka iji sie ike ngwongwo ntụ, dịka nri, ihe ịchọ mma na ngwaahịa nlekọta ahụike.
Amfụfụ liner bụ ihe eji eme ihe n'ozuzu ya, nke e ji kọọ ụfụfụ polyethylene. Ihe ndị a anaghị emepụta akara, a na-ejikarị ya maka mgbochi mgbochi.
Lindị Liner bụ otu ụzọ mpempe akwụkwọ, ihe a bụ EVA, EPE wdg.
Na ya na-agbanwe na-eziga contractility na akpa n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Adabara niile iche iche nke akpa akara, nwere ike iji ugboro ugboro, ma akara mmetụta bụ n'ozuzu.
Enwere ike iji ya mee ihe na aluminom-plastic mejupụtara akpụkpọ ahụ mejupụtara na akara akara ka mma.
Akụkụ ndị bụ isi maka ịdị ọcha, uzuzu, adaghị mmiri vepo mmiri, ọ bụghị n'ihi iru mmiri ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ iji gbanwee nkwụsi ike ya.
Enwere ike itinye akara gluu n'otu ibe ma ọ bụ abụọ dị ka mkpa ndị ahịa si dị. E nwere akwa na-ekpo ọkụ gbazee agbaze na-ekpuchi na akara akara nke eriri akara aluminom. Mgbe usoro kpo oku site na igwe ntinye ihe ma ọ bụ igwe eletriki, a ga-emechi akwa akwa ahụ na egbugbere ọnụ nke akpa ahụ. Typedị eriri a dị n'ụdị ihe ọ bụla dị iche iche., Ọkachasị maka iko iko, mana nsonaazụ ya adịghị mma karịa akara akara ntinye.